Xhuma imodemu yakho ye-3G usebenzisa iSakis3G | Kusuka kuLinux
Uma ungumsebenzisi we Inethiwekhi ye-GSMuma usebenzisa I-GNU / Linux futhi uma unemodemu ye-3G engakusebenzisi kusistimu yakho kufanele ubheke I-Sakis3G.
Anginayo leyo nkinga ikakhulukazi kepha ngifuna imininingwane yomngani ngithole lowo mbhalo olula (Sakis3G), ngokuyisisekelo, ekwazi ukubona indawo ezungezile (umnyombo, ukusatshalaliswa, imodemu, opharetha, imvelo yedeskithophu) futhi ngikunikeze uxhumano lwedatha ngemizuzwana.
I-Sakis3G iyakwazi ukumisa imodem USB o Bluetooth nasendaweni bathi ingasebenza kumanethiwekhi I-CDMA. Futhi kunesizinda sayo ikhodi yamazwe angaphezu kwama-44 futhi uma kwenzeka izwe lakho lingekho, isiza sikunikeza imininingwane yokwengeza eyakho.
Ungayilanda kusuka kulesi sixhumanisi ukuya ku- i386, amd64, armv4t kanye armv5t noma zombili.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Xhuma imodemu yakho ye-3G usebenzisa iSakis3G
Umthombo wolwazi? Ngiyabonga 🙂
Inike lapho ukulandwa kuvela khona kulesi sixhumanisi, futhi lapho ikuthumela khona ekhasini le-sakis3g, futhi kuletha ohlangothini lwesokunene inketho yokubona ividiyo yokuthi uhlelo lusebenza kanjani nokuthi luyifaka kanjani, akunzima kakhulu ngokusobala hahahaha, kepha Sizobona, kusasa noma ngosuku olulandelayo engizothenga ngalo umkhawulokudonsa wami bese ngivivinya lolu hlelo oluncane, ukuze luxhumeke kuFedora 16 naku-Mint 12, hehehehehehe kufanele uzame ukubanika idatha enhle nenembile yokuthi i-funka kanjani.
Ngiyitholile ngonyaka odlule futhi ngithanda cishe yonke into eseLinux… isebenza yodwa !! Angikhumbulanga ukumiswa kwemodemu futhi nge-sakis3g kufanele ngifake i-PIN kuphela
Engingakwaziyo, i-mac_live kepha ngicabanga ukuthi yenzelwe kuphela amanethiwekhi we-3G, hhayi i-broadband
Ngicabanga ukuthi uqinisile, empeleni i-fedora 16 yami, ngiyithola ekuqaleni i-3g yami iyi-ZTE enhle, kukhona 2 3, futhi ngiyithola kwasekuqaleni, njengamanje ngixhunywe kuyo futhi iyandiza, bengifuna ukuyilungisa ngaphambi kokuya emsebenzini, ukubheka noma yini hehehehehe kodwa konke kahle kakhulu. Sesivele sifake izinto eziningi ku-linux ngaphandle kokumiswa, kancane kancane siyathuthuka.
Dj santix kusho
Benginobuntu futhi imodemu ibilungile kepha ngafaka i-linux mint futhi ngicabanga ukuthi kuzodingeka ngiyilande hahaha ngiyabonga ngesixhumanisi
Phendula u-Dj Santix